के तपाईंलाई थाहा छ साइबर क्राइम भनेको के हो ? पढ्नुहोस - sambahak
Home शिक्षा के तपाईंलाई थाहा छ साइबर क्राइम भनेको के हो ? पढ्नुहोस
के तपाईंलाई थाहा छ साइबर क्राइम भनेको के हो ? पढ्नुहोस
भक्तपुर । विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कको प्रयोग गरेर हुने कुनै पनि किसिमका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा कानुनद्वारा निषेधित कम्प्युटरसम्वन्धीत दुरुपयोग वा अपराधहरू नै साइबर अपराध हो । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याडउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ ।​ यसलाई हेर्ने र रोकथाम गर्न ल्याईएको कानुन साइबर कानुन हो ।
Previous articleप्रविन शाहीको चिनेको छैन तिमीलाई बजारमा (भिडियो सहित)
Next articleमोवाईलको कारण भयावह अवस्था आउँदै २० वर्षपछि हरेक घरमा एउटा पागल हुने पक्का